फेलिएर सेनेटरी प्याड एम्बेष्टर प्रियंका कार्की ! - Nepal's Digital News Paper
फेलिएर सेनेटरी प्याड एम्बेष्टर प्रियंका कार्की !
काठमाडौं । नेपालका अधिकाँस ग्रामिन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाले रजस्वला हुँदा सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्दैनन् । स्वच्छ कपडा अर्थात प्याड प्रयोग गर्न लजाएकै कारण कयौ महिला मृत्युको मुखमा पनि पुगेका छन् । यसरी मृत्युको मुखमा कति पुगे ? कतिले विरामी परे ? त्यसको एकिन डाँटा नेपाल सरकारसँग छैन । तर, ग्रामिन क्षेत्र र सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै महिलाहरु सेनेटरी प्याड प्रयोग नगरेकै कारण ठुलो जोखिम भने माल्नु परिरहेको छ ।
प्याड खरिद गर्न महिलाहरु पसमा जाँदैनन । सेनेटरी प्याड किन्न उनीहरु लजाउने गर्दछन् । औषधी पसलमा पुगेर सेनेटरी प्याड किन्ने नेपाली महिलाको संख्या नगन्य मात्रामा छ । नेपाली महिलाभित्रको लाजलाई हटाउन नेपाल सरकारले अभिनेत्री प्रियंका कार्कीलाई प्याड एम्बेष्टर घोषणा गरयो । तरपनि ग्रामिन क्षेत्रका महिलामा जागरण आउन सकेन ।
२१ फागुनमा प्रियंका ब्वायफ्रेण्ड आयुष्मानसँग सिराह पुगिन । त्यहाँ उनको फाउन्डेशनबाट बनेको शौचालय बिद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिन । त्यही सभामा उनले प्याड प्रयोग गर्ने विधि सिकाइन । प्याड प्रयोग गर्न लजाउनु हुँदैन भन्दै प्याड नै प्रर्दशन गरिन । त्यसयता ब्राण्ड एम्बेष्टरको काममा उनी लागेको देखिएको छैन ।
प्याड प्रयोग गर्न नेपालमा मात्र नभई भारतीय ग्रामिन क्षेत्रका महिलाहरु पनि लजाउने गर्दछन् । यही बिषयलाई लिएर बलिउड अभिनेता अक्षकुमारले फिल्म नै निर्माण गरे । जुनि फिल्म भारतमा निकै चर्चित पनि बन्यो ।
प्रियंका प्याड एम्बेष्टर बनेपछि नेपाली महिलाहरु प्याड प्रयोग गर्नतिर आकर्षण हुने आँकलन गरिएको थियो । तर आँकलन आशामै सिमित बनेको छ । केही संस्थाहरुले बिद्यालयमै पुगेर किशोरीहरुलाई प्याड वितरण गरेपनि अधिकाँस महिलाहरु अझै पनि फोहर कपडा नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
केही सामाजिक संस्थाहरुले प्याड बनाउने विधि ग्रामिन महिलाहरुलाई सिकाउन थालेका छन् । बझाडका केही किशोरीहरु आफैले प्याड बनाउने गरेका छन् । आफैले बनाएको प्याड महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने गरेको सुनर्या गाउँपालिकाकी राजमति भट्टले बताइन ।